नेपाली चलचित्र हलमा फ्लप, युट्युबमा हिट : युट्युब रिलिजले नै घटेका हुन् त दर्शक ? - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
नेपाली चलचित्र हलमा फ्लप, युट्युबमा हिट : युट्युब रिलिजले नै घटेका हुन् त दर्शक ?
आइतवार, अशोज १४, २०७५ (September 30, 2018, 3:10 pm) मा प्रकाशित
एक साताअघिमात्रै हेमराज बीसी निर्देशित चलचित्र ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ युट्युबमा सार्वजनिक गरियो । आना शर्मा, आशिरमान देशराज जोशी, संयम पुरी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्रले छोटो समयमै राम्रो भ्युज कमाएर केही दिन ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा बस्न सफल रह्यो ।
हलमा पानी पनि भन्न नपाएको चलचित्रलाई युट्युबमा सार्वजनिक भएको एक सातामै १८ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । हलमा सुपर फ्लप यो चलचित्र युट्युबमा भने हिट भइदियो ।
तुलसी घिमिरे निर्देशित पछिल्लो चलचित्र ‘दर्पण छाँया–२’ हेर्न हलसम्म दर्शक पुगेनन् । अन्नतः चलचित्र फ्लपको लिस्टमा दर्ज भयो । केही महिनापछि चलचित्रलाई युट्युबमा सार्वजनिक गरियो । चलचित्रले राम्रो भ्युज पाउँदै केही दिन ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा बस्न सफल रह्यो ।
नायिका रेखा थापा र आर्यन सिग्देल अभिनित चलचित्र ʻरुद्रप्रियाʼले हलमा दर्शकको साथ पाएन । हलमा राम्रो कमाइ गर्न नसकेको यो चलचित्रले युट्युबमा भने राम्रै भ्युज पायो ।
निरक पौडेल निर्देशित चलचित्र ʻहोमवर्कʼको अवस्था पनि उही रह्यो । आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठ अभिनित चलचित्र हलमा हेर्न दर्शकले खासै रुचि देखाएनन् । पछि युट्युबमा भने चलचित्रले राम्रै भ्युज पायो ।
यी त केही समय पहिले प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्रका उदाहरण हुन् । वर्षमा १ सयभन्दा बढी नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउँछन् । तिमध्ये ९० प्रतिशत फ्लप हुन्छन् । तर युट्युबमा प्रायः चलचित्रले राम्रो भ्युज पाउँदै आएका छन् ।
हलमा चलचित्र नचल्नुको कारण युट्युबमा चलचित्र सार्वजनिक गरिनु त होइन् ? पछि युट्युबमा आइहाल्छ र ʻफ्रीʼमा हेर्न पाइन्छ भनेर दर्शक हलसम्म नतानिएका त होइनन् ? कलाकार दीपकराज गिरी यसमा सहमति जनाउँछन् ।
यही सोचेरै दीपकले असोज २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ʻछक्का–पञ्जा–३ʼ युट्युबमा नल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
दर्शकमा युट्युबमा आइहाल्छ भनेर हलसम्म नजाने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै त्यो प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन पनि यस्तो निर्णय लिइएको दीपक बताउँछन् । उनी युट्युब रिलिज गर्ने प्रवृत्तिले राम्रा चलचित्रहरू पनि मारमा पर्दै आइरहेको बताउँछन् ।
यता हाल प्रदर्शनरत चलचित्र ʻइन्टु मिन्टु लन्डनमाʼ निर्देशक रेनाशा बान्तवा राईले पनि दीपकको ट्रेन्डलाई फ्लो गर्दै चलचित्र युट्युबमा नल्याउने घोषणा गरिन् । उनी पनि युट्युबले चलचित्रको बजार बिगारेकोमा सहमति जनाउँछिन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ʻयुट्युबमा आइहाल्छ भनेर कुरेर बस्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ, जसका कारण रिलिजको समयमा हलको व्यापारलाई धेरै कम गरिरहेको छ ।ʼ
उनले आफ्नो चलचित्रलाई भिडियो साझेदारी साइट ʻनेटफिक्सʼमार्फत् ल्याउने बताइन् । ʻहामी युट्युबभन्दा ʻनेट फिक्सʼमा इन्ट्री गराउने भनेर लागिपरेका छौं । त्यो नेपाली चलचित्रका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।ʼ
करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका चलचित्र युट्युबमा सर्वसुलभ हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति नै गलत रहेको बताउँछिन् ।
ʻमलेसिया, कतार लगायतका देशमा धेरै संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन्, तर त्यहाँ नेपाली चलचित्रको त्यति डिमान्ड भएको पाइँदैन,ʼ उनले भनिन् ʻत्यसको कारण भनेको युट्युबमा सर्वसुलभ नेपाली चलचित्र हेर्न पाइनु हो । त्यो त निर्मातालाई नै घाटा हो नि साथमा समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई नै ।ʼ
कुनै समय थियो, दर्शकलाई नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न हलसम्म पुग्नुको विकल्प थिएन । अहिले समय फेरिएको छ । प्रविधिको विकाससंगै दर्शकहरू युट्युबमा नयाँ चलचित्रको प्रतिक्षा गर्न थालेका छन् ।
यसले हलको व्यापारमा कमी ल्याउन थालेको छ ।
ʻछक्का पञ्जा ३ʼ र ʻइन्टु मिन्टु लन्डनमाʼयुट्युबमा नल्याउने घोषणा गरिएसँगै अहिले यो विषयमा राम्रै बहस शुरू भएको छ ।
अन्य चलचित्रकर्मीलाई पनि यस विषयले एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । के यी दुई चलचित्रको युट्युबमा रिलिज नगरिने घोषणा कार्यान्वयन होला ? अरु निर्माताले पनि यो ट्रेन्डलाई फलो गर्लान् ? प्रतिक्षा गरौं ।